Ny indostrian'ny rongony dia mivelatra amin'ny taha haingana dia haingana, izay midika fa fahazoan-dàlana rongony an-jatony na an'arivony maro no omena. Ary satria maro ny fanjakana no mamorona lalàna mamela ny orinasa hamokatra ara-dalàna sy hivarotra vokatra rongony, ara-dalàna mangataka fahazoan-dàlana rongony manjary misafotofoto.
Voafaritra ny fahazoan-dàlana ho an'ny rongony
Ny fahazoan-dàlana rongony dia taratasy ara-dalàna navoakan'ny sampan-draharaham-panjakana mifandraika izay manondro fa ny orinasa dia avela ara-dalàna hanatitra, hivarotra, hanodinana na hampitomboana rongony (miankina amin'ny karazana fahazoan-dàlana) mifanaraka amin'ny lalàn'ny fanjakana manomboka amin'ny toerana voatondro ka hatramin'ny ireo mpanjifa avela mividy azy ireo.
Ankehitriny, satria voafehy be ny indostrian'ny rongony, ny fahazoana fahazoan-dàlana rongony amin'ity orinasa ity dia sarotra indrindra: Ny fepetra takiana dia miova arakaraka ny fanjakana, ary tsy izany ihany fa miova arakaraka ny toerana tadiavinao ny asanao (delivery, antsinjarany, fanodinana, fambolena) ary, indraindray, tanàna na distrika kasainao hiasa.
Ny zavatra iray tsy maintsy raisinao dia satria, satria vaovao ity indostria ity dia miova hatrany ny lalàna sy lalàna. Noho izany, mora ny manamaivana ny fomba sarotra sy antsipiriany momba ny fizotry ny fahazoan-dàlana rongony ho an'ny orinasa.
Saingy mazàna dia manome fahazoan-dàlana rongony vitsivitsy fotsiny ny fanjakana amin'ny fihodinana voalohany, ary rehefa afaka taona maro dia mamela orinasa maro hiditra ao amin'ny lalao izy ireo. Ny dikan'izany -tsy misy sakana lehibe amin'ny fitsipika- dia manana fotoana mety ianao.
Zavatra dimy lehibe tokony ho fantatra momba ny fahazoan-dàlan'ny rongony
dia mety ho fifaninanana ('voafetra ”) na firenena tsena misokatra (" tsy voafetra ")
azo omena amin'ny sehatra na fanjakana na eo an-toerana
ny fampiharana dia lasa fari-pahaizan'ny fahazoan-dàlana
ny fangatahana fahazoan-dàlana rongony dia mety ho pejy an-jatony
ny fahazoan-dàlana rongony dia mety hanan-karena.
Satria ny indostrian'ny rongony dia iray amin'ireo mitombo haingana indrindra eran'i Etazonia, ny fanapahan-kevitra hahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony dia fanapahan-kevitra manintona tokoa. Mety hahazo vola dolara an-tapitrisany amin'ity orinasa ity ianao raha milalao tsara ny karatrao.
Na izany aza, ny fampiharana dia voadinika amin'ny antsipiriany. Tsy hanome fahazoan-dàlana ho an'ny rehetra ny fanjakana. Ny mpandamina dia hanombatombana am-pahamalinana ny lafiny rehetra amin'ny drafi-pandraharahanao, ny ekipanao ary ny fahafahanao mamorona tranga miavaka amin'ny fahazoan-dàlan'ny rongony.
Manampy tokoa ny fananana ekipa manam-pahaizana amin'izany. Tsy tokony hanomboka ny fizotry ny fahazoan-dàlana ho an'ny rongony mihitsy ianao raha tsy misy ny fitarihan'ny a mpitsabo rongony.
Na izany aza, misy dingana lehibe azonao atao mba hanatsarana ny vintana ahazoanao ny mari-pana rongony:
Omano ny ekipanao amin'ny fahazoana mari-pana rongony
Ny taona vitsivitsy lasa izay dia tena manan-danja tokoa amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny rongony. Ary ny zavatra iray izay miharihary dia ny tompon'ny fahazoan-dàlana rongony izay tsy manana drafitra orinasa matanjaka sy famatsiam-bola dia toa tsy hahomby.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, miaraka amin'ireo fiovana rehetra lalovan'ity indostria ity dia tokony ho vonona tsara ny mpandraharaha.
Mila manaraka ny lalànan'ny fanjakana sy ny lalàna mifehy azy ianao, ary koa ny ôrdônansy monisipaly ary fantatrao koa ny fomba hitantanana tsara ny orinasanao.
Mba hanaovana izany, dia afaka mandany ora, andro na herinandro ianao, mamaky sy manandrana mamorona drafitra marim-pototra mba-hitazona ny orinasanao tsy hirehitra. Na azonao atao mifanerasera amina manam-pahaizana any an-tsaha izay efa nahavita nitana toerana tsara eo amin'ny orinasa.
Tokony hikaroka ny lalànan'ny fanjakanao ianao raha te hahita raha vonona handray andraikitra ianao, ary avy eo manomboka manomana ny drafitrao.
Mamorona sy manangona teti-bola
Misy fanambarana iray izay tokony ho ao an-tsainao ary hanaitra ny olona sasany izany: tsy afaka mamorona orinasa tsy misy vola ianao.
Ankehitriny, mazava ho azy- ny tranga amin'ny indostria rehetra. Fa miaraka amin'ny rongony, vao mainka zava-dehibe io fanambarana io. Mety mieritreritra ianao fa tsy tokony hiasa saina momba ny mpiasa na ny mpiara-miasa eo am-piandohana. Fa raha ny tena izy: mety ianao mila hitondra mpiara-miasa, mpiasa lehibe ary mpampiasa vola hahazoana fahazoan-dàlana rongony.
Ary manana vaovao ratsy izahay: tsy misy banky na andrim-bola iray izay hametraka ny rantsan-tànanao amin'ny orinasanao raha vao milaza ianao fa orinasa rongony.
Na izany aza, manana vaovao tsara ihany koa isika: misy fomba hafa. Manome a bundle fanombohana fonosana, izay hanome anao doka avo lenta, efitrano fitadiavam-bola, ary drafitra fandraharahana vonona-fampiharana ampaham-bidy mba hanombohana manangom-bola ara-dalàna sy hampiasana azy amin'ny fangatahana fahazoan-dàlana rongony.
Ny teti-bola tokony hilainao hangataka fahazoan-dàlana ho an'ny rongony dia afaka miala amin'ny dolara roa hetsy ka hatramin'ny tranga iray tapitrisa dolara. Fantatra fa lafo dia lafo, fantatray fa ny valiny dia mendrika ary amin'ity Indostria ity izay mety hanana fotoana tokana handefasana rindranasa iray ianao dia ny fahombiazana ihany no safidy anananao.
Ataovy azo antoka ny toerana misy anao
Betsaka ny fanjakana no mitaky fa efa manana antoka ny toerana misy azy ireo mpangataka fahazoan-dàlana ho an'ny rongony. Midika izany fa mila mitady trano mifanaraka amin'ny fepetra takiana momba ny fahazoan-dàlana ao amin'ny fanjakanao ianao, mahazo fankatoavana amin'ny tompon-trano sy tompony (raha manofa trano ianao) hampiasa ilay trano amin'ny orinasa rongony, ary mahazo fankatoavana avy amin'ny tanàna misy ilay trano. hita fa hampiasa azy io amin'ny asa fandraharahana rongony.
Miovaova ny takiana arakaraka ny fanjakanao sy ny tanànanao, ary tokony ho fantatrao ihany koa fa ny tanàna sasany dia mety handoa sarany, mitaky fahazoan-dàlana manokana, na mametraka haba fanampiny amin'ny orinasa rongony. Zava-dehibe ny fanananao ireo zavatra ireo ao an-tsainao rehefa mitady toerana ianao mba hampiharana ny fahazoan-dàlan'ny rongony.
Mifandraisa amina matihanina hanoratra ny mailanao
Ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fahazoana ny fahazoan-dàlan'ny rongony: fanaovana ny fampiharana. Mety manana ny zavatra rehetra ilainao ianao mba hahazoana fahazoan-dàlana, fa raha tsy fantatrao ny fomba fanomanana tsara ny fangatahana fahazoan-dàlana rongony dia tsy mandeha ianao.
Mila mampiseho ireo mpandinika fampiharana ianao fa nahavita ny fahazotoanao. Mila manao ny marina ianao ary tena marina.
Ireo mpandinika fampiharana dia te hahafantatra fa, raha manome fahazoan-dàlana anao izy ireo, dia tsy hahomby mandritra ny volana maro ny orinasanao. Tsy mila orinasa mety hanohintohina ny programa rongony ao amin'ny fanjakana izy ireo. Tokony hasehonao azy ireo fa afaka matoky ny ekipanao sy ny drafitrao izy ireo.
Ataovy ao an-tsaina fa miova ny fangatahana fahazoan-dàlana rongony miankina amin'ny fanjakana, ary koa ny karazana fahazoan-dàlana azonao.
Fehiny: mety ho takiana aminao ny hanome fampahalalana marobe, noho izany aza maika ny fizotrany. Mila fotoana be dia be ny famoronana fampiharana avo lenta. Raha ny marina, ny orinasa rongony sasany dia mandefa fampiharana izay misy pejy an-jatony na an'arivony maro. Tsy zavatra tokony hataonao tsy misy saina izany.
Aza adino: ny fizotran'ny fangatahana a fifaninanana. Ny anao dia tsy tokony hihoatra ny takiana farafahakeliny. Mila misongadina amin'ny valalabemandry izy ary mampiseho ny mpandinika fa ny orinasanao dia vonona ary afaka manohana ny programa rongony ambony kokoa noho ny orinasa rehetra.
Tags:Fahazoana rongony, fahazoan-dàlana cannabis, toro-lalana momba ny lisitra cannabis, ny fomba fangatahana fahazoan-dàlana, ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana rongony